Qeylo dhaan laga soo saaray xaaladaha ay wajahi doonaan dhalaanka keli socodka ah marka lagala noqdo taageeradii la siin jiray | shumis.net
Home » qaxootiga soomalida » Qeylo dhaan laga soo saaray xaaladaha ay wajahi doonaan dhalaanka keli socodka ah marka lagala noqdo taageeradii la siin jiray
Sideed ka mid sagaalka degmo ee gobolka Göteborg ayaa laga soo saaray qeylo dhaan la xirriirta dhalaanka keli socodka ah ee kaalmaddii la siin jiray la joojinayo, kaalmadan oo aheyd mid xafiiska ceyrta qeyb ka yahay. Sidaas waxaa lugu sheegay qorshe degin ay sameeysay shabakada lugu magacaabo “Vi står inte ut” (Dibada joog ma nihin). Hase ahaatee maamulka degmooyinka ayaan ka warqabin arrintasi iyo wel welka laga muujinayo.
Natiijada ka dhalan karta isbadalada ku yimaada xagga taageerada ayaan la ogeyn sababo la xirriira dhalinyaradan oo da’doodii la kordhiyey ayaa shabakadu aaminsan tahay in jaha wareer ka imaan doono.
“Waxaa ay waayayaan degannantii iyo ammanaddii ay ku heeysteen reeraha ay la joogeen ama guryaha dhalinyarada la dejiyo, qofka wakiilka ka ah (goode man-ka) iyo iyaga oo joojin doona iskuulada ay dhigtaan. Waxeeyna degi doonaan guryaha dadka waa weeyni la dejiyo kuwaas oo ka baxsan magaalada Göteborg. Waxaana sidoo kale la doonayaa in eey keligood is dabaraan” ayey tiri Kinna Skoglund, oo ka tirsan shabakadda“Vi står inte ut” (Dibada joog ma nihin) xustayna in arrimaha da’a kordhinta laanta socdaalku sameeyey ay abuurtay walaac ah dhalaanku ku fekeraan sideey naftooda ugu taqalusi lahaayeen ama ay isku dili lahaayeen.
Hey’adda dibad joog ma nihin (Nätverket Vi står inte ut), oo ka kooban shaqsiyaad la shaqeeya keli socodka dhalaanka ah iyo carruuraha, ayaa u kuuragalay habka xafiiska ceyrta u maareeyn doono kolka dhalaankaasi da’dooda la kordhiyo (18 jiro) oo laga dhigo ineey qaan gaar yihiin, in misna sideed degmo oo ka tirsan sagaalka degmo ay weli dhalaankaasi kula dhaqmayaan kuwo da’doodu yar tahay tan iyo inta laanta socdaalka sharcigooda magangalyo doonimo wax ka badaleeyso ama aannu iman sharciyo kale.
Degmooyinka ay ka mid yihiin Askim/Frölunda/Högsbo iyo Örgryte/Härlanda oo dhamaantood ka tirsan gobolka Göteborg ayaa sheegay in weli si qaanuuniyan ah ay dhalaankaasi keli socdka ah ay ula dhaqmayaan kuwo aan qaan gaarin, lana sii daganayaan reeraha ay la joogaan tan iyo inta codsigooda magangalyo doonimo ku imanayo isbadal iyo go’aano. Taasi macnaheedu waxaa weeye in dhalaankii da’diisa la weeyneeyo sharcigana loo diido uu heeysto fursad ah in uu qaadan karo racfaan.
Marina Johansson, oo ah ka tirsan sooshaal demoqraat-ka ( socialdemokrat) ee gobolka Göteborg ayaa sheegtay in qorshe dejinta ay sameeyeen hey’da kor ku xusan aaneey la socon. Waxeey sidoo kale sheegtay in degmooyinka gobolka ay weli ku dhaqmayaan qaaanuunkii hore ee u degsanaa balse laanta socdaalka tahay tan ugu dambeeysa ee isbadal xagga da’da ah iyo sharcigaba keeni karta. Laanta socdaalka ayaa bishii sibteembar ee sanadkii hore sheegay inaan qiimeyn xagga da’da sameyneyn muddada lugu jiro kiiska magangalyo codsadaha.
Laakin kooxda Kinna Skoglund“Vi står inte ut” (Dibada joog ma nihin), ayaa tilmaamtay inaan xaqiiqda sida wararka loo qurxinayo aheyn ee ay tahay wax laga naxo xaaladaha dhabta ee jira siyaasiintu ogeyn. Maria Johansson, waxaa ay ugu dambeyntii sheegtay arrimaha dhalaanka keli socodka iyo qiimeyntooda ay tahay mid shaqi shasi la xirrirta taageeradana uu helayo tan iyo 18 jir balse wixii ka dambeeya sharuudaha ku xiran inuu taagero sii helo ay tahay mid qunyar socod ah.
Title: Qeylo dhaan laga soo saaray xaaladaha ay wajahi doonaan dhalaanka keli socodka ah marka lagala noqdo taageeradii la siin jiray